Estepona beach loft, Hacienda Beach - I-Airbnb
I-LOFT enomtsalane isandula ukulungiswa, inabo bonke ubutofotofo. Kwindawo yokuhlala ezolileyo kwenye yezona ndawo zibalaseleyo ze-Estepona, kuba kukho ukufikelela elunxwemeni ukusuka apho. Inevenkile enkulu evula kuphela ehlotyeni inendawo yokutyela esiza luncedo kwiimeko zikaxakeka. Kukho ibha yolwandle eyaziwayo oya kuyithanda ngokuqinisekileyo: Ulwandle lwase-El Sonora.
Le ndawo inxibelelene kakuhle kakhulu, elunxwemeni kukho indawo efanelekileyo yokukhwela ibhayisekile okanye ukwenza imidlalo.
ILoft enabo bonke ubuntofontofo, enebhedi enkulu ephindwe kabini kunye nesofa enye ekwaba yibhedi. Indawo yasekhitshini yaseMelika, enesofa kunye netafile esongwayo yokutya, i-smart tv, igumbi lokuhlambela elineshawa. Ibalcony encinci ejonge igadi.
46" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-HBO Max, I-Netflix, izitishi zeTV eziqhelekileyo, intambo yepremiyamu
4.69 · Izimvo eziyi-62
Ulwandle luzolile kakhulu, i-Urbanization iphambi kweSibhedlele se-HOSPITEN, kukho iivenkile ezinkulu ezininzi (i-Mercadona, i-Lidl, i-Aldi ...), kunye nemivalo yaselwandle kunye neziko lokuthenga elihle kwimizuzu emihlanu ngemoto (iLaguna Village) . Estepona idolophu 10 imizuzu, Puerto Banus 15 imizuzu kunye Marbella 20 imizuzu.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, ndisesandleni sakho ukuba unditsalele umnxeba.
Inombolo yomthetho: CTC-2019182147